ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြမယ် – AELC
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း လေ့လာချင်ပါသလား … ? ဒါပေမယ့် ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား … ဘယ်လိုရုပ်ရှင် ရွေးကြည့်ရမလဲ .. ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ .. သူတို့ပြောတာတွေ နားမလည်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီစာစုမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း လေ့လာမယ့် ပုံစံတွေ၊ အချက်အလက်တွေ မျှဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသင့်လဲ ?
1. အင်္ဂလိပ်စာ/ အင်္ဂလိပ်စကား အစစ်ကို လေ့လာနိုင်တယ်
အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်အတန်းထဲမှာ ကြားဖူးတဲ့ Listening Lesson က အသံတွေနဲ့ ကွဲပြားနေတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စကားပြောတဲ့အခါ သူတို့က စကားလုံးတွေကို Linking လုပ်ပြီးပြောတာဖြစ်လို့ပါ။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ သဒ္ဒါတွေ မမှန်တာမျိုးတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ် ဒါကလည်း native speaker တွေ မကြာခဏဆိုသလို တကယ်ပြောတဲ့ ပုံစံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ခြင်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို သဘာဝကျကျ ထိတွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အကျွမ်းတဝင် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Native Speaker တွေ ဘယ်လို ပြောကြလဲ ဆိုတာကို ပိုပြီးတော့ နားလည်နိုင်လာပါတယ်။
2. စကားလုံးတွေကို ဆက်စပ် လေ့လာနိုင်တယ်၊ အဲဒါက ပိုပြီးတော့လည်း မှတ်မိစေပါတယ်။ စကားလုံေးတွကို မှတ်မိအောင် ကျက်မှတ်နေရတာ ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မှာ စကားတွေကို အဆက်အစပ်နဲ့ နားထောင်ရတဲ့အတွက် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
3. English speakers တွေ စကားလုံးတွေ၊ သဒ္ဒါတွေကို ဘယ်လို သုံးကြလဲဆိုတာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိလာစေပါတယ်။
စကားလုံးတွေ များစွာသော သဒ္ဒါ အသုံးအနှုန်းပုံစံတွေကို သဘဝကျကျ ကြားနေခြင်း က အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ပိုပြီးတော့ ထိတွေဖို့ အခွင့်အရေးရစေပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အဲဒီလိုမျိုး အထိအတွေ့ များနေခြင်းက စကားလုံးတွေ၊ စကားပြောပုံစံတွေ၊ သဒ္ဒါတွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးတော့ သတိထားမိလာစေနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့အတွက် အချက် (၄) ချက်
1. စိတ်ဝင်စားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ရွေးပါ
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့အတွက် ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားရွေးတဲ့အခါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဇတ်ကားမျိုးကို ရွေးချယ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတာကို နားလည်အောင် နားထောင်ဖို့ကို သတိမထားဘဲ ဇတ်လမ်းကိုပဲ အာရုံရောက်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဇတ်ကားဆိုပေမယ့် အရေးကြီးတာက အင်္ဂလိပ်ဇတ်ကား ကိုရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်ပြီးတော့ နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။ စကားလုံး အသစ် (သို့) မသိတဲ့ စကားလုံး ကြားတိုင် အဘိဓါန် လှန်နေရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ အဲလို လုပ်မယ့်အစား နားမလည်တဲ့ နေရာမှာ ခဏရပ်ပါ၊ ပြီးတော့ ရှေ့နောက် ပြောစကားတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားပါ။ ရှေ့က ဇတ်ဝင်ခန်းက ဘယ်လိုလဲ နောက်မှာ လာမယ့် ဇတ်ဝင်ခန်းက ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ဆက်စပ်တွေးပါ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးကို အင်္ဂလိပ်လို တွေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။
3. စကားစုအတိုတွေကို နောက်က လိုက်ဆိုပါ
စကားလုံး အသစ် (သို့မဟုတ်) စကားစု အသစ်တွေ့တဲ့အခါ အသံထွက်ပြီး လိုက်ဆိုပါ။ လိုက်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ သူပြောသွားတဲ့အတိုင်း အသံထွက် လေယူ လေသိမ်း အတတ်နိုင်ဆုံး အတိအကျ ဖြစ်အောင် လိုက်ဆိုပါ။ အဲလို လိုက်ဆို/ လိုက်ပြောတာက အသံထွက်တွေ လေယူလေသိမ်းတွေ မှန်ကန်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည် တိုးတက်လာစေပါတယ်။
4. Subtitles မထိုးဘဲ ကြည့်ပါ
တကယ်လို့ ကိုယ်က နားမလည်လို့ Subtitle ထိုးကြည့်တယ်ဆိုရင် နားလည်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ Reading က လာတဲ့ နားလည်မှု ဖြစ်ပြီးတော့ Listening က နားလည်တာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မျက်လုံးက နားလည်တာ မဖြစ်ပါစေနဲ့၊ နားက နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ၊ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာ Communicate လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်နားမလည်တိုင်း တဖက်က ပြောတဲ့သူကို စာနဲ့ ရေးပြခိုင်းလို့ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာတဲ့အခါ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ?
Step 1: English subtitles မပါဘဲ ၂-၃ မိနစ်လောက် ဇတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုကို ကြည့်ပါ။
Step 2: အဲဒီ ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုပဲ subtitles နဲ့ တစ်ခါ ကြည့်ပါ။
Step 3: အဲဒီဇတ်ဝင်ခန်းကိုပဲ ထပ်ကြည့်ပါ ခဏ pause လုပ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေ ပြောတဲ့အတိုင်း အနောက်က လိုက်ပြောပါ။
Step 4: အဲဒီဇတ်ဝင်ခန်းကိုပဲ ထပ်ကြည့်ပါ၊ ဒီတစ်ခါတော့ သူတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲ တပြိုင်တည်း ကိုယ်လည်း လိုက်ပြောပါ။
Step 5: ကိုယ်လိုက်ပြောနေတာကို အသံဖမ်းပါ၊ သူတို့ပြောတာနဲ့ ဘယ်နေရာတွေ ကွဲလွဲမှုရှိလဲ နှိုင်းယှဉ်ပါ။
Step 6: လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်လည် ပြုပြင်ပါ။
Step 7: ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာ ပြန်လည် အသုံးချပါ။
တစ်နေ့ကို နာရီဝက် တစ်နာရီလောက် ပုံမှန် လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်က သိသိသာသာ တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စဉ်းစားမနေပါနဲ့ ဒီနေ့ပဲ စလုပ်လိုက်ပါ …
တကယ် လေ့ကျင့်ပြီး တိုးတက်ကြပါစေ …
ဒီလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆိုင်ရာ လေ့လာနည်း လမ်းညွှန်တွေ၊ သင်ခန်းစာတွေကို လက်မလွတ်စေဖို့ AELC page ကို See First လုပ်ထားစေချင်ပါတယ် …